Wararka – Page 1570 – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Dowlada iyo Maamulka Puntland oo Heshiis ku gaaray Magaalada Garoowe+Sawiro
Magaaada Garoowe ee Gobolka Nugaal waxaa maalmihii dambe ka socday Kulamo u dhaxeeyay Madaxda dowlada soomaliya iyo Maamulka Puntland ujeedka kulamadaas ayaa ahaa sidii puntland loogu qancin lahaa qaadashada nidaamka 4.5. Dowladda Somaliya iyo Maamulka Puntland, ayaa waxay ku heshiiyeen heshiis ka kooban 10 qodob, waxaana Dowladda u saxiixay Ra’iisal Wasaare Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, halka Puntland uu u saxiixay ...
Howlgalo Laga Sameeyay Qaar kamid ah Degmooyinka Magaalada Muqdisho.
Ciidamada Hay’ada Nabad sugida iyo sirdoonka qaranka dowlada soomaliya ayaa maanta howlgalo waxa ay ka sameeyeen goobo cayiman oo ka mid ah Degmmoyinka magaalada Muqdisho. Cabdikaamil Macalin Shukri Afhayeenka Wasaaradda Amniga oo howlgalkan uga Waramay Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed ee SONNA ayaa sheegay in ciidamada NISA ay maanta qadeen howlgallo qorsheysan oo laga sameeyay guryo iyo geerarshyo lagu xareeyo gaadiidka, halkaasina ...
Dhageystayaal kusoo dhawaada warka Habeen Radio SImba ee Magaalada Muqdisho waana Habeenimo axad ah Tariikhdana ay ku beegan Tahay 3-4-2016 warka habeen 3-4-2016
Hogaamiyaasha Soomaalida ee Gobolka Woqooyi Bari Kenya oo Sheegay in ay u Midoobayaan Dagaalka Al-shabaab.
Hogaamiyaasha sar sare ee laga soo doorto gobolka woqooyi bari ee dalka Kenya ayaa muujiyey sida ay uga goantahay in ay u midoobaan dagaalka lagula jiro xarakada Al-shabaab. Dhamaan hogaamiyayaasha ayaa sheegay in falalka Al-shabaab ay geestaan in aysan ka turjumeynin diinta islaamka, iyagoo sheegay in diinta islaamka ay tahay diin nabdeed. Hogamiyaashaan ayaa shalay ka qeyb galay munaasabad lagu ...
Xiliga ay Dhacayso Doorashada Hogaanka Nusoj oo La Shaaciyay +Dhageyso
Guddiga badbaadinta suxufiyiinta Soomaaliyeed ee NUSOJ ayaa maAnta ku dhawaaqay xiliga ay dhici doonto Doorashada Hogaanka Ururka NUSOJ, Guddomiye ku-xigeenka guddiga badbaadinta suxufiyiinta Soomaaliyeed ee NUSOJ Ismaaciil Sheekh Khaliifa oo shir jaraa`id saxafada ugu qabtey maqaalada Muqdisho waxa uu kaga dhawaaqey in 20-ka bishaan lagu qaban doono Muqdisho, shirweyne looga hadlayo aayaha Wariyeyaasha laguna dooran doono hogaanka cusub ee NUSOJ, “20-bishaan ...
Faaf-Faahin ku Saabsan Hoobiyaasha ku Dhacay Degmada Warta-nabada
Gabar iyo hooyadeed Ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhaawacmeen hoobiye ku dhacay Xaafada Buur hindi Ee dagmada Warta-nabada ee Gobolka Banaadir. Qof ku sugan degmada warta-nabada oo la hadlay idaacada simba ayaa xaqiijiyay in tiro hoobiyaal ah oo kusoo dhacay degmada in mid kamid ah uu ka dhacay xaafada Buur-hindi isla markaana ay waxyeelo kasoo gaartay gabar iyo hooyadeed. haatana ...
Madaxweynaha: “Soomaaliya iyo Masar waxay xoojinayaan xiriirkooda iskaashi’’ SAWIRRO
Muqdisho, April 3, 2016: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay Kaaliyaha Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Jamhuuriyadda Masar ugu qaabilsan arrimaha Afrika Maxamed Idris. Madaxweynaha waxaa uu ka mahad celiyay xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya labada dal, iyo sida ay labada dhinac diyaar ugu yihiin xoojinta xiriirkooda. Labada waddan ayaa iska kaashan doona ...
Kooxo Hubeysan oo Degmada Xamar Weyne ku Dilay Nin la Dashay Xildhibaan ka Tirsan Baarlamanka Soomaliya
Sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya Degmada Xamar weyne, gaar ahaan nawaaxiga Shaneemo Afrika, rag hubeysaa ayaa halkaas ku dilay ruux la sheegay in uu la dhashay xildhibaan ka Tirsan Baarlamanka soomaliya. Kooxda hubeysan ayaa la sheegay in ay rasaas ku fureen shaqsigaan la sheegay in uu la dhashay xildhibaan ka tirsan baarlamanka soomaliya xilli uu doonaayay inuu galo gaarigiisa. oo ...
Dhageystayaal kusoo dhawaada warka Duhur Radio Simba ee Magaalada Muqdisho waana Duhurnimo axad ah Tariikhdana ay ku beegan Tahay 3-4-2016 warka duhur 3-4-2016
Airport –ka Magaalada Brussels ee Dalka Biljimka oo Maanta Dib loo Furay.
Waxaa manta markii ugu horeysay dib loo furay garoonka diyaaradaha ee magaalda Brussels halkaasi oo ay ka dhaceen isbuucii hore weeraro qasaaro badan geestay. Qeyb ka mid ah garoonka diyaaradaha ayaa dib loo furay kadib 12 maalin oo uu hakad ku jiray garoonka diyaaradaha ee Brussels Daacish ayaa sheegatay weerar qasaaro geestay oo ka dhacay garoonkaasi kaasi oo ahaa isqarxin garoonka ...
Page 1,570 of 1,830« First...1,5401,5501,560«1,5681,5691,5701,5711,572	»	1,5801,5901,600...Last »